Xarun tacliin oo looga hortagayo xagjirnimada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xarun tacliin oo looga hortagayo xagjirnimada
La daabacay torsdag 26 november 2015 kl 10.29
Mona Sahlin dowladda ayey u qaabilsan tahay ka hortaga xagjirnimada. Foto: TT.
Mona Sahlin oo dowladda u qaabilsan ka hortaga xagjirnimada ayaa hadda soo bandhigtay qorsho lagu joojinayo dhalinyarada ay kooxda argagaxisada ah ee Dacish iyo kuwa la midka ah ka qorato Sweden.
Waxaa laga hirgelinayaa xarun tacliin magaalooyinka kalo ah Stockholm, Göteborg, Örebro iyo Göteborg. Hadefkana waa sidii si dhaqso ah khabiirada deegaanadan ka soo jeeda u soo farogelin lahaayeen marka la arko caalamado xagjireyn.
Bisha Januari ayaa magaalooyinka Göteborg, Örebro iyo Borlänga laga hirgelinayaa wax loogu wacay quriga tacliinta oo lagu aruurinayo awood xirfadeedka iyo waayo aragnimada looga rabshado wadayaasha xagjirka ah.
Halkan ayaa xataa caawin ka heli karaan waalidiinta iyo ehelada uga welwelsan da’yartooda xagjirnamo, sidoo kale ruuxa doonaya in uu iskaga baxo bay’adaha rabsho wadayaasha ayaa talooyin iyo taageero weydisan kara xaruntaan.
– Waxaan ku bilaabeynaa afar degmo oo dhibaatadan ku soo badanayso kuwaas oo hadda qirtay gabaabsi in uu ka jiro wax ka qabadkooda xagjiriinta, ayey tiri Mona Sahlin oo weramaysay SVT Nyheter.
Hirgelinta Aqalka tacliinta Kunskapshusen waxaa looga deyday degmada Århus ee dalka Danmark. Degmadan ayaa dhibaatada xagjirnimada ka hortageeda billowdey sannadkii 2007 kaddib weerarkii argagaxiso ee London sannadkii 2005.